विष्णु माझीलाई जसरी पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
गत साता साप्ताहिकमा प्रकाशित कभर स्टोरीको अनलाइन संस्करणमा आएका केही प्रतिक्रिया :
विष्णु माझीमाथि उनका कथित पति सुन्दरमणि अधिकारीबाट चरम श्रम शोषण भएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । जहिलेसम्म विष्णु माझीको स्वर बजारमा बिक्छ उनका कथित पतिले शोषण गरिरहनेछन् । जब स्वरले साथ छोड्छ उनलाई गलहत्याएर निकालिनेछ । यसमा विष्णु माझी लगायत उनका आफन्त बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।
हरेक कुरालाई नराम्रो नजरले हेर्ने हाम्रो बानी । बिष्णु माझीको आफ्नै केही कारण वा समस्याले गर्दा जनमानसमा अगाडि नपरेको हुनसक्छ, यो विषयमा अन्यथा टीकाटिप्पणी गरेर गर्नु वा व्यक्तिगत जीवन खोतल्नु गलत हो । यो विष्णुको आफ्नै व्यक्तिगत चाहना पनि हुन सक्छ । विष्णु मिडिया र जनमानसमा देखिन चाहन्नन्, नेपालमा मात्र होइन संसारभर यस्ता थुप्रै कलाकार छन् जो आफ्नो नाम धेरै चर्चित भए पनि अनुहार पर्दा पछाडि राख्न नै रुचाउँछन् । विष्णुका श्रीमान्ले उनलाई शोषण गरेको भनेर कसले ठोकुवा गर्न सक्छ ? यस्तो चर्चित व्यक्तिको यदि कसैले शोषण गरेको भए विष्णुले पहिले नै मिडिया वा कानुनी सहायता लिन्थिन् होला । यदि यति चर्चित भएर पनि उनी शोषणकै सिकारमा छिन् भने यो उनको आफ्नै गल्ती हो । उनी लुकेर स्टुडियोमा पस्नुअगाडि कानुनको ढोका ढकढक्याउन जानुपथ्र्यो, तर मलाई लाग्छ आफ्नै इच्छाका कारण उनी गुपचुप छिन् । पत्रकार महोदयहरूसँग मेरो आग्रह छ– काम गरी खाइरहेकाहरूलाई गरिखान दिनुस्, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न नेपालमा
अन्य थुप्रै विषय छन त्यता ध्यान दिऊँ ।
विष्णु माझीको वास्तविक कुरा सञ्चार माध्यममा आउनैपर्छ । आजको जमानामा कुनै पनि नारी भूमिगत बस्न चाहँदैनन् । विष्णु माझी भूमिगत हुनुको कारण सुन्दमणि अधिकारी नै हुनुपर्छ ।
विष्णु माझीले गाएका गीत सुन्दा कसको मन पग्लिँदैन र ? विष्णु माझीले गाएका गीतले लाखौंलाख भ्युज पाउँछन् । हामी उहाँले गाएका गीत सुन्छौं तर उहाँलाई देख्न नपाउँदा धेरै दु:ख लाग्छ । देवी घर्ती, चन्द्रकला बिसी, बिमाकुमारी दुरा, लक्ष्मी न्यौपाने, राधिका हमाल, सन्ध्या बूढा, शान्तिश्री परियार, मीना लामा आदि धेरै गायिकालाई गाउने बेलामा देख्छांै, तर बिष्णु माझीलाई नदेख्दा दु:ख लाग्छ । अब आउने दिनहरूमा विष्णु माझीलाई पनि देख्न पाउँ र सञ्चार मामध्यमले पनि उनलाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरोस् ।
विष्णु माझी बाहिरी वातावरण मन पराउँदिनन् जस्तो लाग्यो अन्यथा यति धेरै प्रशंसकले माया गर्दा बाहिर नआउने कुनै कारण छैन ।
यदि सुन्दरमणिले नै बन्धक बनाएको हो भने कलाकारहरूका संघ–संगठनले एक दशकसम्म के हेरेर बसिरहेका छन् त आवाज नउठाई ? अर्को कुरा विष्णुु माझीलाई बन्धक बनाइएको हो भने र उनीमाथि त्यस्तो अमानवीय कार्य भैरहेको हो भने आफूले सहन नसक्ने अवस्थामा त आफैं कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिर आउनुहुन्थ्यो होला नि ? कुनै पनि कुराको सकारात्म–नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नुअघि हामीले त्यसभित्रको वास्तविकता के छ, गहिरिएर बुझ्न जरुरी छ । सबै कुरामा उनका श्रीमान् सुन्दरमणिलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । किनभने विष्णु माझीलाई यसरी नै भूमिगत भएर बस्न अनि गीत मात्र बजारमा पठाउन मन लागेको हो कि ?
सबैलाई थाहा छ, वर्षौं भैसक्यो, फेरि यी सञ्चार मामध्यमहरू किन चुप ? अब खोज्न जरुरी छ, अहिले नभए कहिले खोज्ने ? जाग हाम्रा पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरू । -प्रदेशी ज्ञानु श्रीनेट
विष्णु माझीलाई जसरी पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ । सत्यतथ्य खोज्नुपर्छ विचरा बुवा–आमाले कति खोजिरहेका छन् ? यो सुन्दरमणि भन्ने व्यक्तिले उनको श्रमशोषण गरेको छ । किन बन्धन बनायो त विष्णु माझीलाई ? यसबाटै कुरा बुझिन्छ नि ।
सत्यतथ्य के हो ? वास्तविकता बाहिर आउनुपर्‍यो ।
विष्णु माझी देशकै गहना हुन् । उहाँको सत्यतथ्य खोजी हुनुपर्छ अनि माझीका दुलाहाविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ, यो त
अति भयो ।
जबसम्म स्वयं विष्णु माझी बोल्दिनन्, तबसम्म यो समस्या सामाधान हुँदैन ।